Carwooyinka Carwada Caruurta Leh Odisha | Boqolaal Gaadiidka Sawir leh
Gawaarida baabuurta ee Odisha
Gaadiidka kirada waa duco maalintaas ah sida aan u isticmaali karno dabacsanaan ballaaran iyo xoriyadda dhaqdhaqaaqa sida baabuurta gaarka loo leeyahay. Nasashada iyo madaddaalada waa waxqabad muhiim ah oo loogu talagalay kuwa raba in ay wax bartaan oo ay horumaraan marka laga reebo caafimaadkooda. Tours waa ilaha ugu wanaagsan ee barashada waqtiga firaaqada; gaar ahaan dhallinyaradayada, laakiin waligeed ma sahlanaan lahayd gobolka Odisha, haddii Gawaarida baabuurta ee Odisha ma aysan joogin.
Sandbirdada cagaaran ee Tours waa wakaaladda socdaalka ee degaanka bixinta kireystayaasha baabuurta ee Odisha. Waxaan hubineynaa in dhammaan adeegyada socdaalka lagu xalliyo daryeel weyn iyo dheelitirnaan. Waayo-aragnimadaada aad nagala soo xiriiri lahayd waxay had iyo jeer kugula talin lahayd inaad sii wadato wax badan oo aan ku siin karno baabuur-goboleedka casriga iyo tababarayaasha kirada ah ee Odisha. Waxaan leenahay gaari weyn oo gaari ah adeeggaaga si aad wax uga qabatid xuduudaha adag ee adag ee Odisha. Gawaarideena si buuxda ayuu ugu qalabeeyaa dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee ku raaxaysta inta lagu jiro socdaalka. Uma baahnid inaad ka welwelisid inaad tahay kali ama kooxo asxaab ah, ha ahaado koox weyn ama koox yar, iyo wax kasta oo kiisku noqon karno safka ugu haboon ee ku haboon labada jeebkaaga iyo dhadhankaaga.
Tababaraha Carabka Odisha waxaa lagu sharxay hoos: -
Fleet ee Baabuurta AC iyo Tababarayaasha
Baabuurta: Mercedes Benz, BMW, Fortuner, Corolla Altis, Honda City, Honda BRV iyo sidoo kale.
Tababarayaasha: 13, 19, 27, 41 & 45 seeriyaal caan ah.
Gawaaridu waxay ka yar yihiin saddex sano waxayna leeyihiin aalado amniga / Qalabka, Qalabka gargaarka degdegga ah, Biyaha Macdan, iyo waxyaabo kale oo muhiim ah.
Adeegyada waxay ku jiraan maalmaha 24 Hrs / 7 asbuucii
Shahaadooyinku waa wax la barto, si fiican u khibrad badan lehna waxay leeyihiin telefoonada gacanta si ay isku-dubbaridaan.
Sanduuqa Hubka waa sanduuqa rasmiga ah ee Shirkadaha Qaran iyo Qaran ee Qaran ee Qaran.
weydiin noo / Contact Us